ရေစီးကြောင်းအလိုက် — Seadstem – Southeast Asian Digital
ဤစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျောက်နှင့် ကျောက်မျက်ရတနာများကဲ့သို့ ပလတ်စတစ်အလုံးအသေးများနှင့် အကြီးများကို ခွဲခြားနိုင်သော ဆွဲငင်အားသုံး စကျင်ကျောက်စက်အမျိုးအစားတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ရေပုံးထဲမှရေများကို သွန်ချလိုက်လျှင် သဘာဝအတိုင်းပဲ မြေပြင်ပေါ်သို့ စီးဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ရေသည် ကမ္ဘာ့ဆွဲအားကြောင့် မြင့်ရာမှနိမ့်ရာသို့ အမြဲစီးဆင်းသည်။ ရေ‌သေနတ်မှထွက်လာသောရေသည် မြန်ဆန်စွာ စီးဆင်းသည် ။
၎င်းကို အားသုံးပြီးတွန်းထုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရေအရှိန်က ၎င်းကို အားဘယ်လောက် အသုံးပြု လိုက်သလဲပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်။ ကတော့ထဲကို ရေလောင်းထည့်သည့်အခါ ကတော့၏ကျယ်သောအပိုင်းသည် မြန်ဆန်စွာပင်ရေပြည့်သွားသည်။ ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရေသည် ကျယ်သောနေရာတွင် မြန်ဆန်စွာသွားလာနိုင်ပြီး ကျည်းမြောင်းသော လည်ပင်းပိုင်းသို့ရောက်သောအခါ နှေးကွေးစွာ စီးဆင်းသွားသည်။ ကျည်းမြောင်းသောအောက်ခြေသို့သွားသော အခါ ၎င်းသည် ကတော့ ထောင့်များကို ပြင်းထန်စွာတွန်းကန်ပြီးစီးဆင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေသည် ကျယ်သောနေရာမှ ကျည်းသောနေရာသို့ ရွှေ့လျားသွားသောအခါ ရေဖိအားသည် မြင့်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မိုးရေသည် နံရံပေါ်ထက် လျင်မြန်စွာကျဆင်းသွားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကြမ်းတမ်းသော မျက်နှာပေါ်တွင် ၎င်း၏ပွတ်အားကြောင့် ဖြည်းညင်းစွာ စီးဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဆွဲအားသည် ရေစီးဆင်းသည့် လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ သက်ရောက်သည်။ ကမ္ဘာဆွဲအား၊ လုပ်အား နှင့် ပွတ်အားသည် ရေဖိအားနှင့် ရေစီးအားဘယ်လောက် မြန်ဆန်စွာ စီးဆင်းသလဲပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိသည်။
ရေသည် ကွဲပြားခြားနားသော နည်းလမ်းပေါင်းများစွာဖြင့် စီးဆင်းနိုင်သည်။ ရေများမည်ကဲ့သို စီးဆင်းသွားလဲဆိုတာကို လေ့လာတဲ့ပညာရပ်ကို ရူပဗေဒခွဲတွင် အရည်ရွေ့လျားအား ဟုခေါ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်တွင် ကျောင်းသားများသည် ပလတ်စတစ်ဘောလုံးရွေ့လျားမှုကို လေ့လာပြီး ရေ ဘယ်လိုစီးဆင်းသလဲဆိုတာကို သင်ယူရပါလိမ့်မည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို လက်တွေ့အသုံးချခြင်း နှင့် ချိတ်ဆက်ဖြင့် ကျောင်းသားများသည် သိပ္ပံပညာနောက်ကွယ်က လှေကားထစ် စိုက်ပျိုးခြင်းကို နားလည်လာပါလိမ့်မည်။
ဖိလစ်ပိုင်ရှိ ဘနဝေး(Banaue) လှေကားထစ်စိုက်ပျိုးရေးသည် ပြန့်ပြူးသောအလွှာများအထပ်ထပ်ဖြင့် တောင်စောင်းများတွင် ရှိသည်။ ၎င်းနေရာများသည် အလွန်မတ်စောက်သည့် တောင်စောင်းများဖြစ်ပြီး လယ်သမားများကို ဆန်စိုက်ပျိုးခွင့် ပေးထားသောနေရာ ဖြစ်သည်။ အံ့အားသင့်စွာပင် ၎င်းပုံသဏ္ဍန်များသည် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ထောင်ရှိပြီဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်းတို့သည် ခေတ်မှီ စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာများမပါရှိပဲ လက်ဖြင့် အားလုံးကို လုပ်ဆောင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုလှေကားထစ်စိုက်ပျိုးရေးများကို စိုက်ပျိုးရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လူကဖန်တီးထားသော ရေပေးဝေမှုစနစ်ဖြစ်သည့် ဆည်မြောင်းစနစ်ဖြင့် ရေလောင်းခြင်းပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည် တောင်ကျစမ်းရေ နှင့် ချောင်းတို့မှလာသော ရေများကို မြောင်းသဖွယ်သွယ်ပေးပြီး အလွှာအထပ်ထပ်သို့ ရေဖြန့်ဝေပေးသည်။ ဒါကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတော့ ဆည်မြောင်းစနစ်သည် ရေသည်လည်း တောင်ပေါ်ပိုင်းမှစီးဆင်းသကဲ့သို့ ကမ္ဘာမြေကြီးက အရာဝတ္တုများကို မြင့်ရာမှနိမ့်ရာသို့ ဆွဲသည့်အား ကမ္ဘာ့ဆွဲအားကို စွမ်းအင်အပြည့်အဝ အသုံးပြုထားခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။
ဤပရောချက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများဖြင့် ဘနဝေး(Banaue) လှေကားထစ်စပါးခင်း ပုံစံငယ်တည်ဆောက်ဖို့ရန် ဖြစ်သည်(ပုံ-၂)။ ကျောင်းသားများသည် လက်တွေ့ လှေကားထစ်စပါးခင်းထဲက ဆည်မြောင်းစနစ်ကဲ့သို့ လှေကားထစ်သဏ္ဍန်ပြုလုပ်၍ ပလစ်တတစ် သို့မဟုတ် သစ်သားပုတီးစေ့ များကို ရေအားသုံး၍ ပထမအလွှာမှ ရေများစီးဆင်းနိုင်သည့် ဒီဇိုင်း ဆွဲစေပါ။ ပုတီးစေ့လေးများသည် ရေပေါ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်ကား ရေထဲတွင် ပေါလောပေါ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့၏သိပ်သည်းဆ (mass per unit volume) သည် ရေ၏သိပ်သည်းဆထက် နိမ့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။သူတို့သည် တရွတ်တိုက် ထွက်ခွာသွားသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေသည် စေးပျစ်သည်။ ဆိုလိုသည်ကား ၎င်းသည် စီးဆင်းရာတလျှောက် အနောက် သို့မဟုတ် ၎င်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာဝတ္တုများကို ပွတ်တိုက် အားအသုံးပြုသည်။
နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပရောချက်ဖြင့် အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဥ်ကို တည်ဆောက် ပြသရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ စက်တစ်ခုအတွက် ထိုင်ပြီး တည်ဆောက်မယ် ပထမတစ်ခေါက်ကြိုးစားကတည်း ၎င်းစက်သည် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ သင်စိတ်ကူးထားတာနဲ့တော့ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ ကျောင်းသားများကို ၎င်းတို့ ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်းပုံစံများဆွဲလာခိုင်ပြီး ၎င်းဒီဇိုင်းကို စမ်းသပ်မယ် ပြီးတော့ ၎င်းတို့ကို တိုးတက်စေရန် ပြုပြင် မိုးမံမယ်ဆိုပြီး ကျောင်းသားများကို အားပေးပါ။
သက်မွေးကျွမ်းကျင် အင်ဂျင်နီယာများပင်လျှင် ပထမတကြိမ်ထဲကြိုးစားပြီးအောင်မြင်တယ်ဆိုတာ ရှားပါးလွန်းပါတယ်။
ပလတ်စတစ် ပုတီးလုံး များသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရန် ရေစီးဆင်းမှုကို အသုံးပြုထားသည် လှေကားထစ် ဆည်မြောင်းစနစ် ပုံစံငယ်ကို တည်ဆောက်ပါ။ ပုတီးစေ့များကို အပေါ်ဆုံး အလွှာမှ စတင်ပါ။ ပြီးနောက် နောက်ဆုံးအလွှာသို့မရောက်မီ တိုင်အောင် အလွှာတစ်ဆင့်ခြင်းစီ နိမ့်လျက်စီးဆင်းစေပါ။
လှေကားထစ်စိုက်ပျိုးခြင်းနောက်ကွယ်က သိပ္ပံသဘောတရားနှင့် ၎င်းတါင် ရေစီးဆင်းပုံ အမျိုးအစားများကို နားလည်စေပါ။
အကယ်၍အရာဝတ္တု ရေတွင် ပေါလောပေါ်နေပါက မည်သည်က သတ်မှတ်ထားသနည်း?
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ခေတ်မီစက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုထားခြင်းမရှိသော လှေကားထစ် ဆန်စပါးစိုက်ခင်းတွင် မည်ကဲ့သို့ ဆည်မြောင်းရေ ပေး‌ဝေသနည်း?
ရေသည် အပူချိန်အမြင့်နှုန်းထားတွင် အဘ‌ယ်ကြောင့် အရည်အဖြစ်နေသနည်း? မည်ကဲ့သို့ ၎င်းသည် သက်ရှိအရာများကို ကူညီနေသနည်း?
ပေါလောပေါ် ရေခဲတုံးများသည် သဘာဝရှိတိရိစ္ဆာန်များကို ကူညီပေးနေပါသလား? အကယ်၍ ကူညီခဲ့လျှင် မည်ကဲ့သို့ ကူညီနေသနည်း?
လမီနာ စီးဆင်းမှု (laminar flow) ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း?
လှေကားထစ် စိုက်ပျိုးရေးစနစ်လုပ်ဆောင်ချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဘယ်နည်း?
လှေကားထစ်စိုက်ပျိုးရေး ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း? ၎င်း၏ အကျိုးကျေးဇူးမှာ အဘယ်နည်း?
လှေကားထစ်စိုက်ပျိုးရေးသည် မြေတိုက်စားခြင်းကို မည်ကဲ့သို့ လျော့ချပေးသနည်း?
လှေကားထစ်စိုက်ပျိုးရေး၏ ဆိုးကျိုးမှာ အဘယ်နည်း?
လှေကားထစ်စိုက်ပျိုးရေး၏ အရေးပါမှုမှာ အဘယ်နည်း?
Harishbabu Kalidasu, Dr. Mya Thein adapted from Ben Finio, PhD, Science Buddies. This project is based on the "Phil It Up" friendly competition designed by employees of Fluor Corporation located in Manila, Philippines.
ဖုန်းဖြင့် ရေ နှောက်ကျိခြင်းကို စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း